‘जात्रै जात्रा’ को सिक्वेल बन्दैन: निर्देशक भट्टराई - www.biratsandesh.com
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:००
आउँदो शुक्रवार (जेठ ३) बाट चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ प्रदर्शन हुँदैछ । चलचित्रको रिलिजअघि पर्याप्त चर्चा छ । यसअघि ‘जात्रा’ र ‘शत्रु गते’ निर्देशन गरेका निर्देशक प्रदीप भट्टराई यो फिल्मबाट पनि उत्तिकै आशावादी छन् । यो फिल्म पनि हिट भएको खण्डमा प्रदीपले निर्देशन गरेका हिट तीन फिल्मले ह्याट्रिक हान्नेछन् । ‘जात्रै जात्रा’ किन हेर्ने ? निर्देशक भट्टराई यो फिल्म मनोरञ्जनका लागि हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार यो फिल्म एउटा पूर्ण चलचित्र हो । ‘दर्शकले ‘जात्रा’ पनि मनोरञ्जनका लागि हेर्नुभएको थियो, त्यसको तुलनामा यसको सिक्वेलमा अझै मनोरञ्जन छ,’ निर्देशक भट्टराई सुनाउँछन् । उनी यो फिल्म आफूले निर्देशन गरेका यसअघिका फिल्मभन्दा स्तरीय भएको दाबी गर्छन् । ‘जात्रा’ मा कथा अपूर्ण भएको र त्यसको बाँकी कथा ‘जात्रै जात्रा’ मा भेटिने उनी बताउँछन् । ‘कथाको हिसाबले यो फिल्म पूर्ण सिनेमा हो, ‘जात्रै जात्रा’ मा कथा अपूर्ण छोडिएको थियो,’ उनी अगाडि थप्छन् ।
उनले दर्शकलाई ‘जात्रा’ कै कथाका रुपमा यो फिल्म हेर्न पनि दर्शकलाई आग्रह गर्छन् । साथै उनले अब यसको तेस्रो सिक्वेल नबन्ने बताउँछन् । ‘जात्राको नाममा अरु फिल्म बन्ला तर २० करोड कमाए पनि यही कथामा तेस्रो सिक्वेल बन्दैन,’ प्रदीप भन्छन्, ‘हामीले ‘जात्रै जात्रा’ मा नै पूर्ण कथा छोडेका छौँ, अर्को फिल्मको लागि कथा उठाउन पर्दैन ।’ ‘जात्रै जात्रा’ को कुरा गर्नुपर्दा यो फिल्ममा विपिन कार्की, दयाहाङ राई, रविन्द्रसिंह बानियाँ, रविन्द्र झा, राजाराम पौडेल, वर्षा राउत लगायतका कलाकारको शीर्ष भूमिका छ । रिलिजअघि चलचित्रले गज्जबको प्रतिक्रिया पाएको छ । यसको गीत ‘जीवन जात्रा हो’ ले पनि खुबै चर्चा बटुलेको छ । यसको पहिलो भाग ‘जात्रा’ ले पनि दर्शकबाट तारिफ बटुलेको थियो ।
सरकार विरुद्धको आन्दोलनको तयारीमा रहन कार्यकर्तालाई देउवाको निर्देशन
वृद्धआश्रममा तिजपर्व मनाउदा आमाहरू खुशी भए
विराटनगर विमानस्थलमा हुने जोखिमलाई न्युनिकरणको लागि फायर फाईटिङ अभ्यास
भारतीय लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत चौथो चरणको मतदान आज
९ बुँदे माग राख्दै राजपाद्वारा आन्दोलनको घोषणा
पूर्वका निजी अस्पतालले ३० प्रतिसतसम्म शूल्क बढाए
तिहारको अन्तिम दिन आज भाइटीका
किन हुन्छ भक्भकाउने समस्या? उपचार के?
उद्योग संगठन मोरङको साधारणसभामा प्रचण्डले के भने ?